iPhones တွေအတွက် အကောင်းဆုံးသော Fast Chargers များ - iOS Banker Myanmar
2017 ခုနှစ်မှာ မိတ်ဆက်ပေးလာခဲ့တဲ့ iPhone X ကနေစပြီး Apple ဟာ Fast Wired Charging ကို ထောက်ပံ့မှုပြုလာပါတယ်။စမတ်ဖုန်းတွေကို တစ်နေ့တာလုံး လုံလောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အားမြန်မြန်သွင်းနိုင်တာက ယနေ့ခေတ်မှာ အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်လာပါပြီ။ ( ၁၀ ) မိနစ်၊ ( ၁၅ ) မိနစ် အားသွင်းလိုက်ရုံနဲ့ နာရီအနည်းငယ်ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်တာက သိပ်ပြီး အံ့အားသင့်စရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ် Flagship စမတ်ဖုန်းတိုင်းလိုလို အဆိုပါနည်းပညာ ပါလာနေပြီမို့ပါပဲ။2020 iPhone SE အပါအဝင် iPhone 11 Series, iPhone XR နဲ့ iPhone X တို့အားလုံး Fast Charging ကို Support လုပ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ Apple ဟာ iPhone 8 နဲ့ iPhone X စတဲ့ Lineup ထဲကစပြီး Wired Fast Charging ကို Support လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Fast Charger ပစ္စည်းတွေကတော့ iPhone 11 Series ကျမှသာ ဘူးထဲ တပါထဲပါလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘူးထဲ ပုံမှန်ပါလာတဲ့ 5W USB Charger ဖြင့် အားသွင်းပါက ( ၂ ) နာရီကျော်လောက် သွင်းမှ အားပြည့်မှာပါ။ Fast Charger ဖြင့် မိနစ် ( ၃၀ ) အားသွင်းပါက 0% to 50% ရောက်မှာဖြစ်ပြီး၊ 75% ရဖို့အတွက်ကတော့ မိနစ် ( ၄၀ ) ကနေ ( ၄၅ ) မိနစ်သွင်းရပါလိမ့်မယ်။
iPhones တွေအတွက် ဘယ် Fast Chargers ကို ဝယ်ရမလဲဆိုတာကို မပြောပြခင် ဘယ် iPhones တွေက Fast Charger ကိုSupport လုပ်သလဲ ပြောပြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီ Lists ထဲမှာမှ iPhone 11 Pro Series တစ်ခုသာ 18W USB-C Fast Charger ကို ဘူးထဲမှာ တပါထဲပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်iPhone Series အားလုံးကတော့ 5W USB-A Charger သာ ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် ( ၂ ) နာရီခွဲသာသာလောက် အားသွင်းဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Apple ဟာ iPhone Lineup အတွက် 18W Fast Charging Speed ရှိတဲ့ USB-Power Delivery Fast Charging Protocol ကိုသာSupport လုပ်ပါတယ်။ iPad Pro Lineup မှာတော့ 30W Fast Charging Speed အထိ Support လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက် iPhones တွေကို 18W ထက် ပိုများတဲ့ Watt တွေနဲ့ အားမသွင်းနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အားသွင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iPhones တွေ၏ Fast Charging Protocol အရ အများဆုံး Fast Charging Speed ဖြစ်တဲ့ 18W ထက် ကျော်လွန်ပြီး ဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 30W ဒါမှာမဟုတ် 80W နဲ့ သွင်းလည်း 18W Fast Charging Speed ကိုသာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone တွေ Support လုပ်တဲ့ USB-PD Protocol အရ Fast Charging ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုလျှင် USB-PD Certified ဖြစ်တာကို အသုံးပြုဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ Samsung ရဲ့ Galaxy Note Lineup နဲ့ S Lineup တွေ၊ Google ရဲ့ Pixel Lineup လည်း အဆိုပါFast Charging Protocol ကိုပဲ အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Best Fast Chargers for iPhone
တကယ်တော့ Apple ကလည်း 18W USB-C Fast Charger တွေကို သီးသန့် ရောင်းချပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Third-Party တွေထက်တော့ ဈေးအဆမတန် များလျှက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး USB-PD Certified ဖြစ်တဲ့ Third-Party ထုတ် Fast Chargers ပစ္စည်းများကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Aukey 18W USB-C Fast Charger – $14.99 [Amazon]
Choetech 18W USB-C Fast Charger – $14.99 [Amazon]
Aukey 30W USB-C Fast Charger with USB-A port – $21.99 [Amazon]
Aukey 60W USB-C GaN Charger with USB-A port – $34.99 [Amazon]
RAVPower 61W USB-C GaN Fast Charger – $22.99 [Amazon]
Choetech 60W USB-C GaN Fast Charger – $28.99 [Amazon]
The Best USB-C to Lightning Cable for iPhone
မှတ်ထားရမှာက USB-C Charger တစ်ခုထဲနှင့် မပြည့်စုံသေးဘူး ဆိုတာပါပဲ။ USB-C to Lightning Cable ကိုလည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ( USB-A to Lightning Cabe နဲ့ အသုံးပြုလို့ မရဘူးနော် )
Choetech USB-C to Lightning 4ft. Cable – $13.99 [Amazon]
Anker USB-C to Lightning 3ft. Cable – $12.99 [Amazon]
Apple USB-C to Lightning Cable – $19 [Amazon]
Ref : Rajesh Pandey
5.4 လက်မအရွယ်အစားရှိတယ့် iPhone 12 Display ပုံများထွက်ပေါ်လာ